ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း – Union Civil Service Board
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း
August 6, 2018 November 25, 2021 admin ucsb
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီတွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အကယ် ဒမီ ကေတုမတီခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းမော်၊ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဦးပွား၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဝင်းဟန်၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)မှ ပါမောက္ခချုပ် ဦးအောင်တင်စိုးနှင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တက္ကသိုလ်မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက သင်တန်းဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ယခုသင်တန်းကို ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာ အဓိကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး အနာဂတ်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ပိုမိုကြီးမားသည့် တာဝန်များကို ပခုံးပြောင်းထမ်းဆောင်ကြမည့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များ၏ အရည်အသွေးများ မြင့်မားထက်မြက်လာစေပြီး မိမိတာဝန်ယူရမည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းမှာ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်နှင့် အနာဂတ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ သင်တန်းကာလအတွင်းမှာ အရာရှိကြီးများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဘာသာရပ်များကို ဆွေးနွေးပို့ချ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အနေအထားနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖန်တီးပုံဖော်မှု၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဖွင့်ဆိုချက်များ အယူအဆများနှင့် သဘောတရားများ စသည်တို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတွင် အဓိကကျသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို အနည်းငယ်ပြောကြားလိုပါကြောင်း။ လက်ရှိ နိုင်ငံတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးရှိ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးနေရာများကို စနစ်တကျ စိစစ်ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ ထိရောက်စွာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာ စောင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ရေးနှင့် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေး အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား အထောက်အကူပြုခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေး၊ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေး၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် တာဝန်များကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ လည်းကောင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း။ ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA)နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး (နေပြည်တော်) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ရုံးပရဝဏ်အတွင်း ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ရေးကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါ သင်တန်းကျောင်းတွင် အဆင့်ဆင့်သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် Short Term, Medium Term , Long Term Training Course များ Generalized Training Program နှင့် Specialized Training Program များ၊ Bachelor Degree International Training Program များကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း လေ့ကျင့်ရေးမူဝါဒ(Civil Service Training Policy)ကို ရေးဆွဲပြုစုပြီး လုံခြုံရေး၊တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက် တင်ပြခဲ့ရာ အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းရန် သဘောတူခဲ့ပါကြောင်း။ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သည့် Training Policy အပေါ် မူတည်၍ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ပို့ချလျက်ရှိသော သင်တန်းများ၏ အရည်အသွေးအာမခံခြင်း ( Quality Assurance-QA)ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Quality Management System- QMS)ကို ပြုစုရေးဆွဲလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ASEAN Cooperation on Civil Service Matters-ACCSM ၏ကဏ္ဍအောက်ရှိ Public Service Training Inistitutes- PSTI Network ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာပိုမိုမြင့်မား လာစေမှာ ဖြစ်ကြောင်း။ နိုင်ငံတော်အသွင်ကူးပြောင်းဆဲကာလတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပေးနေသည့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကလည်း ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းမွန် ထိရောက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသူများလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ကိုယ်စားပြုသူများ ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပြည်သူကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာမှာ အခရာကျသူများဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပေါ်ထွန်းလာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည့်သူများ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို သင်တန်းသား(၁၆)ဦး၊ သင်တန်းသူ(၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၂၀)ဦး တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာ ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ ရက်သတ္တ(၈)ပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
← ၁၆-၆-၂၀၁၈ ရက် (စနေနေ့)တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၃၃)နေရာအတွက် ပထမ အဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အောင် မြင်သူများစာရင်း
ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် စာစစ်ဌာန (၅) ခုအတွက် အသိပေးကြေညာချက် →
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ မှ၁၂ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်(Launch of the Civil Service Reform Strategic Action Plan) အခမ်းအနားတွင် ဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့၌ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဌဦးဝင်းသိမ်းကမြွက်ကြားသည့် မိန့်ခွန်း
July 11, 2017 November 25, 2021 admin ucsb
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း
December 22, 2017 November 25, 2021 admin ucsb
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း
July 20, 2018 November 25, 2021 admin ucsb
Office No. 17, Naypyitaw, Myanmar. Phone :067-409057, 067-409190. Fax :067-409045, email:[email protected]